Ncha Antibacterial ọ na-emerụ ahụike gị?: Ngwakọta Triclosan nwere ike ibute Super Germs, Allergy na Asthma - Ibi ndụ ahụike 2022
Ncha Antibacterial ọ na-emerụ ahụike gị?: Ngwakọta Triclosan nwere ike ibute Super Germs, Allergy na Asthma
N'ime ọkwa nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) nke iwu nke ga-achọ ka ndị nrụpụta wepụta ihe akaebe edere na ngwaahịa nje nje ha adịghị mma ma dị irè, ọtụtụ ndị na-asa aka amalitela ịtụgharị uche: "Ncha nje nje bacteria ọ na-enyere aka ịlụso nje ọgụ ọgụ?"
A na-efesa akara "antibacterial" n'ụdị ncha na mmiri mmiri dị iche iche, nke a na-atụ aro na ọ ga-eduhie ndị na-azụ ahịa bụ ndị kwenyere na ọ ga-eme ka ahụ dịkwuo mma ma chebe ha pụọ ​​​​na nje virus.
"N'ihi nnukwu mkpughe nke ndị na-azụ ahịa na ngwaahịa ndị a, anyị nọ na FDA kwenyere na ekwesịrị inwe uru doro anya na iji ncha antibacterial iji dozie ihe ize ndụ ọ bụla," Andrea Fischer, onye ọkachamara n'ihe gbasara ọha na eze na FDA, kwuru n'oge nnọkọ mgbasa ozi Monday.
N'ọnwa Mee, FDA kwuputara na webụsaịtị ya na ọ na-enyocha ncha nje na-asachapụ ahụ. N'oge ahụ, webụsaịtị ahụ kwuru na "ụlọ ọrụ ahụ enweghị ihe akaebe na triclosan na ncha antibacterial na ịsacha ahụ na-enye uru ọ bụla maka ịsacha ncha na mmiri mgbe niile." Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndị na-emepụta ihe dị ka ọnwa isii, June 2014, iji zaghachi iwu a na-eme atụmatụ, nke yikarịrị ka agaghị emejuputa ma ọ dịkarịa ala otu afọ. Na-esote, FDA ga-emecha iwu ahụ wee kpebie ma ngwaahịa ndị a "na-ahụkarị ka ọ dị mma ma dị irè" site na Septemba 2016.
Ruo mgbe ahụ, FDA na-atụ aro ka ndị mmadụ na-eji ncha na mmiri nkịtị kwọọ aka ha ma zere iji ncha nje na-egbu nje, nke ka ga-adị n'ahịa maka oge a. Ụlọ ọrụ ahụ na-atụkwa aro ka a na-asachapụ aka na-aba n'anya nke nwere opekempe pasent 60 mmanya ma ọ bụrụ na ncha na mmiri adịghị.
Ka ọ dị ugbu a, nnweta ngwaahịa nje bacteria nwere ike butere ndị na-azụ ahịa ihe egwu na-ehicha aka ha n'akwụsịghị akwụsị iji chebe onwe ha pụọ ​​na nje nje dị ize ndụ nke nwere ike ibute ọrịa nje. Ebe ọtụtụ nje na-agbasa mgbe mmadụ metụ aka n'ọnụ ha, na imi na anya, a na-ekwu na iji ncha na mmiri ọkụ na-adịkwa irè. Enwere ike iji oke ncha nke nje antibacterial tụnyere mgbe mmadụ na-aṅụ ọgwụ nje na-enweghị isi. Ngwaahịa ndị a ga-aga n'ihu na-egbu ụfọdụ ma ọ bụghị nje bacteria niile, nke nwere ike iduga na-ewuli elu nke germs, ka Daily Green na-ekwu.
Ịdị ọcha nke ukwuu nwere ike ịkwụsị igbu nje bacteria dị mma ma mee ka ohere nke ịmepụta allergies na ụkwara ume ọkụ, dị ka echiche ịdị ọcha si dị. Cliniclọ ọgwụ Mayo na-ekwu ọtụtụ ọmụmụ achọpụtala ụmụaka ndị ekpughere na unyi na germs nwere obere allergies n'oge ntorobịa ma e jiri ya tụnyere ụmụaka ndị a zụlitere na gburugburu ebe dị ọcha.
Iji ọgwụ nje eme ihe gabigara ókè, dị ka triclosan dị na ncha nje nje, nwere ike ibute ọgba aghara endocrine site na ikpughe triclosan. A na-ahụta triclosan dị ka otu n'ime ihe ndị na-ahụ maka nje bacteria na-ahụkarị nke a na-achọta na ngwaahịa ma jikọta ya na-emetụta usoro hormonal nke onye. Endocrine Society, otu ndị dọkịta na ndị ọkà mmụta sayensị ọkachamara na sistemu homonụ, akpọrọ triclosan dị ka ihe na-agbanwe ọkwa nke homonụ thyroid na homonụ ịmụ nwa dị ka testosterone na estrogen. "Echere m na FDA nọ n'azụ usoro ahụ," ka Dr. Andrea Gore nke Mahadum Texas dị na Austin kwuru, onye bụ onye nduzi nke nkwupụta Endocrine Society banyere hormone na-akpaghasị chemicals, ka Associated Press na-akọ. "Olee mgbe ị na-esepụta eriri wee kwuo na anyị kwesịrị iwepụ nke a n'ime ngwaahịa ndị a na-etinye na akpụkpọ ahụ anyị? Kedu ihe akaebe zuru oke?"
Ụlọ ọrụ Cleaning America enyela FDA data nke na-egosi na triclosan dị mma ma dị irè. "Triclosan bụ otu n'ime ihe ndị a na-enyocha na nyocha nke a na-eji na ngwaahịa na ngwaahịa nlekọta ahụike," ka Brian Sansoni, onye na-ekwuchitere otu ahụ kwuru, onye òtù ya gụnyere Colgate-Palmolive na Henkel Consumer Goods Inc., onye na-emepụta ncha Dial.
A ka amabeghị ma triclosan ọ dị mma ma ọ bụ dị irè maka iji ọha na eze eme ihe, mana FDA ka na-agba ndị mmadụ ume ka ha mara ihe ize ndụ ahụike nwere ike iji ncha antibacterial nwere ike iwepụta. Enwere ike ịhụ ọnụnọ triclosan n'ụlọ na ahụ mmadụ dịka ọ bụkwa ihe na-egbochi nje na-eji ncha ncha ụlọ.
Mgbe ncha na-emeghachi omume na mmiri chlorinated, ọ nwere ike ịmepụta chloroform dị ize ndụ nke a maara na ọ bụ ọrịa carcinogen nke mmadụ. Emepụtara kemịkalụ a na-egbu nje nje, yana kemịkal ndị ọzọ ọtụtụ iri afọ gara aga tupu enwee iwu chọrọ nyocha sayensị nke ihe ndị a na-ehicha ihe, ka CBS News na-akọ. Ugbu a, afọ iri anọ ka e mesịrị, FDA na-ewere ihe ngwa ngwa n'inyocha ọkwa nchekwa na ịdị irè nke ngwaahịa a.
Centlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) na-akwado ndị mmadụ ka ha saa aka ha opekata mpe 20 sekọnd. A na-atụkwa aro iji aka sanitizer, nke na-egbukarị nje na mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ethanol, ọ bụghị kemịkalụ dị ka triclosan, ma ọ bụrụ na enweghị ncha na mmiri.
Iji mụtakwuo maka ihe egwu nwere ike ịdị na ncha antibacterial, pịa ebe a.